विश्वकपमा बलले स्टम्पमा लाग्दा पनि किन झरेनन् बेल ? | सबै खेल
क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट फिचर विश्वकप क्रिकेट
३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:०४
अस्ट्रेलियाविरुद्ध भारत दोस्रो ओभर बलिङ गर्दै थियो । फास्ट बलर जसप्रित सिंह बुमराह बलिङ गर्न अघि बढे । उनले फ्याँकेको बल अष्ट्रेलियन ब्याट्सम्यान डेभिड वार्नरको ब्याटमा लागेर स्टम्पमा ठोक्कियो । त्यो देखेर बुमराह खुशी मनाउन बुर्लुक्क उफ्रिए । तर, स्टम्पमा बलले लाग्दा पनि बेल झरेन । वार्नर आउट भएनन् । बुमराहको खुशी क्षणभरमै तुहियो ।
विश्वकपमा सधैं विकेट र चौका-छक्काको चर्चा बढी हुन्थ्यो । तर, यसपाली चर्चाको केन्द्रमा छन् स्टाम्पमाथी राखिने बेल । क्रिकेटमा ब्याट्सम्यान आउट गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट तरिका हो, बोल्ड । बलरले फ्याँकेको बल स्टम्पमा गएर ठोकियो भने त्यसलाई बोल्ड आउट भएको भनिन्छ ।
तर, बोल्ड आउट हुन स्टम्पमा बलले लागेर मात्र भने पुग्दैन । स्टम्पको माथी राखिएको बेल पनि झर्नुपर्छ । चाहे आगोको झिल्का उठ्ने गरि बलले स्टम्पमा लागोस्, तर बेल झरेन भने ब्याट्सम्यान आउट हुँदैन ।
बेल नझर्नु एकदमै दुर्लभ कुरा हो । बलले स्टम्पमा न्यून गति वा सामान्य फोर्सले लागे पनि बेल झर्छन । तर, यसपटकको विश्वकपमा धेरैपटक बलले स्टम्पमा लाग्दा पनि बेल झरेका छैनन् । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ५ पटक त्यस्तो घटना भएका छन् ।
१. इंग्ल्यान्ड भर्सेस दक्षिण अफ्रिका (११औं ओभर)
इंग्ल्यान्डका बलर अदिल रशीदले दक्षिण अफ्रिकि ब्याट्सम्यान क्विन्टन डि ककविरुद्ध बलिङ गरे । लेग स्टम्प बाहिर ड्रप भएको सो बल डि ककले रिभर्स स्विप गर्ने कोसिस गरे । तर, बल उनको ब्याटमा लागेर अफ स्टम्पमा ठोकियो र पछाडि बाउन्ड्री तिर गयो । इंग्ल्यान्डका खेलाडी आक्रामक ब्याट्सम्यान डि ककलाई आउट गर्‍यौं भनेर खुशी मनाउन खोज्दै थिए । अफसोच, बेल झरेनन् । डि ककको खातामा ४ रन जोडियो ।
२. न्युजिल्यान्ड भर्सेस श्रीलंका (छैठौं ओभर)
न्युजिल्यान्डका फास्ट बलर ट्रेन्ट बोलले श्रीलंकाका ब्याट्सम्यान करुणारत्नेविरुद्ध बलिङ गर्दै थिए । करुणारत्नेले बललाई अपर कट गर्ने कोसिस गरे । तर, इन्साइड एज लागेर बल सिधै स्टम्पमा गएर ठोक्कियो । फेरि पनि बेल झरेन । रिप्लेमा हेर्दा बलको ठक्करले बेल हल्का हल्लिएको देखियो, तर झर्न भने झरेनन् । करुणारत्ने नटआउट ।
३. अष्ट्रेलिया भर्सेस वेस्ट इन्डिज (तेस्रो ओभर)
मेचेल स्टार्कले क्रिस गेलविरुद्ध बलिङ गर्दा विकेटकिपरबाट क्याचआउट भए । अम्पायरले बल ब्याटमा लागेर आएको आवाज सुनेर आउट दिएका थिए । क्रिस गेलले तुरुन्त डिसिजन रिभ्यु सिस्टम (डिआएअएस)को प्रयोग गर्दै अम्पायरको निर्णयलाई चुनौती दिए । रिभ्युमा हेर्दा बलले ब्याटमा होइन अफ स्टम्पमा लागेको देखियो । अम्पायरले बल ब्याटमा ठोकिएको होइन स्टम्पमा ठोकिएको आवाज सुनेका थिए । तर बेल झरेन । अन्तत: क्रिस गेल नटआउट रहे ।
४. इंग्ल्यान्ड भर्सेस बंगलादेश (४६औं ओभर)
इंग्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्सले फ्याँकेको सर्ट बलमा बंगलादेशका सैफुद्दिन अगाडि बढेर लामो सट प्रहार गर्ने प्रयास गरे । तर, बल उनको जिउमा छोएर स्टम्पमा गएर ठोक्कियो । बेल यसपाली पनि झरेनन, इंग्ल्यान्ड फेरि अभागी साबित भयो । सैफुद्दिनको प्रहारभन्दा भाग्य बलियो भयो ।
५. भारत भर्सेस अष्ट्रेलिया (दोस्रो ओभर)
डेभिड वार्नर अष्ट्रेलियालाई जिततर्फ अग्रसर गराउन दिलोज्यानले लागेका थिए । जसप्रित सिंह बुमराह भारतलाई जिताउन कसिलो बलिङ गर्दै थिए । उनले औसतभन्दा तिव्र गतिमा फ्याँकेको सर्ट बल वार्नरले रोक्ने प्रयास गर्दागर्दै इन्साइड एज लागेर स्टम्पमा ठोकियो । बेल हल्लिदा पनि हल्लिएन । बेल र वार्नरको भाग्य दुवै बलिया रहेछन् ।
आखिर किन झरेनन् बेल ?
बेलका नझर्नुको पछाडि धेरै कारण हुनसक्ने धारणा बाहिर आएको छ । विश्वकपमा प्रयोग गरिएका बेलभित्र विशेष प्रविधिबाट फ्ल्यास लाइट जडान गरिएको छ । बेल स्टम्पबाट झरेपछी ती फ्ल्यास लाइट बल्न थाल्छन् । ती लाइटका कारण बेलको तौल बढेको र सामान्य गतिमा बलले लाग्दा नझरेको धेरैको ठम्याइ छ ।
‘मलाई लाग्छ बेलभित्र लाइट राखिएकाले नयाँ बेलको वजन बढेको छ । त्यसैले तिनलाई झार्न सधैंभन्दा बढी फोर्स आवश्यक परिरहेको छ ‘, अष्ट्रेलियाका कप्तान आरोन फिन्चले भने ।
कसैको तर्क के पनि छ भने स्टम्पको माथी बेल अड्याउन जुन खाल्डो बनाइएको छ त्यो विश्वकपमा प्रयोग भएका स्टम्पमा औसतभन्दा बढी गहिरा छन् । जसकारण बेल झर्नुपर्ने गतिमा बलले लाग्दापनी बेल त्यही खाडलमा अड्किएर झरिरहेका छैनन् ।
तर, आइसिसीले भने बेल नझर्नुको विषयमा गरिएका सबै टिकाटिप्पणीको खण्डन गरेको छ । आइसिसीले विश्वकप २०१९ मा प्रयोग गरिएका बेलको वजन सामान्य अवस्थामा प्रयोग हुने बेल र हावा चल्ने मौसममा प्रयोग हुने बेलको वजनको बिचको रहेको जनाएको छ ।
‘विश्वकपमा प्रयोग भएका बेल त्यस्तो चर्चा गरिएजति भारी छैनन् । सामान्य बेलभन्दा थोरैमात्र वजन बढी छ । तर, हावाहुरी चलेको बेल प्रयोग गरिने बेलभन्दा निकै हल्का छन् । त्यसैले बेल नझर्नुको कारण वजन होइन ।’, आइसिसीले प्रष्ट्यायो ।
आइसिसीले जेजस्तो स्पष्टीकरण दिएतापनी जारी विश्वकपका १७ खेल सकिँदा ५ पटक स्टम्पमा लागेर पनि बेल झरेनन् । यस्ता घटनाले बलरको मनोबल गिराउन सक्छन् । यस्तो हुनु खेलको नियमसम्मत भएपनी खेलभावना विपरित हो । यद्यपि यसको दोषी भने कोहि छैन । ती नझरेका बेल बाहेक ।
बाईबाई ‘सिक्सर्स किङ’